Inicio/ciyaaraha/Dhexdeena/Dhexdeenna oo leh nooc kasta oo aan la qufulin
3 567.522 3 daqiiqo akhri
Dhexdeenna oo leh wax kasta oo la furay (La cusbooneysiiyay 15/02)
Maanta waxaan ku bari doonaa sida ku raaxayso ah Hack Ka mid ah Dhexdeenna oo leh wax kasta oo la furay. Waxaan horay kuu barinay inaad sida loogu ciyaaro Discord (maqal). Waxaan kuu damaanad qaadayaa khibrad gaar ah ciyaarta xilligan. Waxaan horeyba u ognahay sida ay ciyaartan fiidyowgu u xiiso badan tahay iyo sida fayrasku u noqday mawduuciisa iyo fudeydkiisa oo bilaash looga helo taleefankaaga gacanta. Adiguna waad awoodaa nala ciyaar annaga oo xakameynayna kombuyutarkaaga.
Kaliya soo baxay: Nooca ugu dambeeyay 12.9s ee naga mid ah ee loogu talagalay Pc
Sidoo kale waad awoodaa yaqaanr nooca Beta ee naga mid ah, halkaas oo aad kaga ciyaari karto codadka qarsoon ee khiyaanoolaha.
Laakiin aan u nimaadno ujeedka, maanta waxaan kuu keenaynaa suurtagalnimada in waayo-aragnimadaadu u tahay sida ugu macquulsan uguna macquulsan; soo degsanaya Hack dhexdeenna ka ah oo leh wax kasta oo quful iyo idin tusaya waa maxay meelaha ku habboon in la qariyo, WAAN TAGNAA!
Waxaan sii mods iyo hacks lagu cusbooneysiiyay kuweena Kanaalka DiscordHalkaas waxaad sidoo kale ka soo sheegi kartaa khaladaadka si bulshadayadu kaaga caawin karto xallinta. Xaqiiqdii waxaad horayba u baran kartaa wax walba oo ku saabsan Mashiinka Casaanka ah, ama ka soo kacay Dhexdeenna, taabasho bilic leh oo ciyaarta ka dhigaysa mid WAYN.
Waxaa laga yaabaa inaad xiiseyneyso: GIANTS mod for Us
MAXAY TAHAY WAX KASTA OO AAN XIRNAYN?
Ciyaaryahanku wuxuu yeelan doonaa liis ay ku habeyn karaan waxyaabaha soo socda:
- Ka tirtir waqtiga u dhexeeya dhimashada (IMPOSTOR)
- Xaddid tirada kulamada (LABADOODABA)
- Muuqaalka Khariidadda (LABADOODABA) .
- Wax ka beddel Xawaaraha (in la kordhiyo ama la dhimo)
Guul otomaatig ah
- Si toos ah ciyaarta u jooji. [Khiyaaneeyayaasha ayaa guuleysta]
- Ciyaarta dhammee. [Crew guuleysta]
- Ku guuleysso ciyaarta hadda bilaabeysa. [Waa in la hawlgaliyo ka hor inta aan la bilaabin]
- Dhamaystir dhammaan howlaha.
U fiirsashada: Qeybta Guusha otomaatiga ah waxay si daran u dhaawici kartaa isticmaalka ciyaarta isticmaaleyaasha kale, LAGUma talinayo in la isticmaalo maadaama ay si xun u waxyeeleyneyso khibrada ciyaaraha sababtoo ah qaabkan dhexdeena ah.
Ikhtiyaar in wax laga beddelo magaca isticmaale kasta.
Mod wuxuu kuu ogolaanayaa inaad naga dhex ciyaarto wax walba oo furan
- Furitaanka Maqaarka.
- Furitaanka guud ee xayawaanka
- Fur Koofiyadaha.
- Ha xadidin sheekada.
- Ka saar xayeysiiska.
- Ciqaab malahan ka tagida ciyaarta.
Waxa kale oo laga yaabaa inaad xiiseyneyso: Ugu fiican Hacks for Annaga naga mid ah BILAASH
Sida loo isticmaalo hack ILAAHAY dhexdeenna wax kasta oo laga furaa ma jiraa?
Ka soo dejiso xiriiriyaha Discord (waa la cusbooneysiiyay 29/11/2020)
Xiriirinta soo dejinta la cusbooneysiiyay GUDAHA kanaalka khilaafka. Ku soo biir bulshadeena si aad u soo dejiso Dhexdeenna mods for PC iyo android, abuuro qolal ciyaarta, dhexdeena kula Codka Codka si wadajir ah bulshada inteeda kale.
Waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa ah hack hoose, looma baahna ka mid noqoshada bulshada.
Naga mid ah Mod menu ee Isbaanishka:
Cashar buuxa (Holymod)
Wixii Android ah:
Waayahay waxaan u nimid qodobka su'aasha. Wixii iskuday ciyaarta Mod Annaga naga mid ah, taas oo ah nooc yar oo awood kuu siinaysa inaad hesho qaybaha ama waxyaabaha ku jira ciyaartan oo si buuxda loo furay bilowgii, guji Halkan .
Si toos ah u soo dejiso qaabka (APK)
Toos u soo degso qaabka (PC 10.22)
Beddelka hack loogu talagalay android (BADAN OO DHAMMAYSAN)
Waxa kale oo jira ikhtiyaar loo adeegsado waxyaabaha soo socda hack:
Este hack Waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku raaxeysato 5 mods isla waqti isku mid ah aalado badan oo dheeri ah, oo ay ku jiraan ogow qofka dhagar qabuhu yahay, had iyo jeer noqo khayaanada, dhexdeena ah oo leh wax walba oo la furay iyo hawlo kale oo badan ... Guji Halkan.
Dhexdeenna waxaa loogu talagalay Desktop (PC)
Nooca ah Hack by Ciyaarta Infinity: Wax walba waa la furay
Mod Pc Dhexdeenna
Tani waxay sidoo kale kuu oggolaaneysaa inaad yeelato dhowr cunsur oo cusub oo aad yeelato noocyo kale oo hagaajin ah si aad ciyaarta ugu maamusho sidaad doonto.
Dhibaatada kaliya ee tan hack, ayaa ah inaad shaashadda 5-ta mod ku yeelanayso oo ay dhibsato.
Waxa kale oo laga yaabaa inaad xiiseyneyso: MEGAMAN mod for Annaga
Waayahay, kor ayaan kaaga tagay xiriiriyeyaasha si aad u soo degsato Mod Apk-ka ciyaarta Dhexdeenna iyadoo wax walba laga furo mobilkaaga. IYOs Go'aankaaga iyo mas'uuliyadda oo dhan adigaa iska leh.
Miyaan ku haysan karaa labada Us Us Apps-ka mobilka?
Jawaabtu waa haa. Haddii aan si guul leh u dhammaystirno tallaabooyinka casharrada naga mid ah Mod Apk.
Waa inaan sidoo kale tilmaamaa si aan ugu ciyaaro hack of Us Us oo leh wax kasta oo aad la furtay asxaabtaada, waa inay sidoo kale ku soo dejistaan ​​moobilkooda, haddii kale suurta gal ma noqoneyso.
Baro: Sidee loo sameeyaa Mods-yadayada ama Qalabka Fudud ee Dhexdeenna?
Si kastaba ha noqotee, haddii doorbidkaagu yahay inuu u ciyaaro sidii loo abuuray, waad awoodaa. Laakiin runtii waxaan kugula talinayaa inaad ku bixiso heerka ugu sarreeya ee aad la ciyaareyso Dhexdeenna Mod Apk oo leh wax kasta oo la furay, WAA WEYN.
kuwa kale HACKS oo aad ka heli karto shabakadeena waa:
Trick inuu markasta noqdo IMPOSTOR
Hack Heer ilaah DHAMMAAN quful la’aan
Iyo waliba kuwa kale hacksy Mods oo aad ku arki karto dhinaca midig ee shaashadeena oo Dooro midka aad ugu jeceshahay.
dhexdeenna dhexdeenna apk oo dhan wuu qufulay dhexdeenna oo wax walba quful ku jiraan dhexdeenna kala soo deg hack dhexdayada dheeman bilaash ah dhexdeenna si fudud oo dhakhso leh dhexdeenna hack dhexdeenna hack 2020 dhexdeenna hack apk dhexdeenna hack mod menu god mode dhexdeenna hack qoraalka qoraalka 'mod menu' dhexdeenna hack mod menu had iyo jeer imposter dhexdeenna hack radar dhexdeenna hackeado dhexdeenna hackeado apk dhexdeenna hackdhegta dhexdeenna aan kula ciyaarno asxaabta dhexdeena xayawaanku bilaash dhexdeenna mod apk oo dhan ayaa la furay dhexdeena mod menu dhexdeenna hargaha cas Dhexdeenna moobiil dhexdeenna hargahoodu waa bilaash dhexdeenna oo dhan wuu qufulay dhexdeenna oo dhan apk quful apk naga mid ah oo dhan quful ugu fiican hack dhexdeenna sida loo soo dejiyo hack dhexdeenna oo wax walba quful ku jiraan sida loogu guuleysto ciyaaraha dhexdeena sida loo sameeyo mod menu dhexdeenna sida hackdhegta dhexdeenna sida loo noqdo hacknaga dhex kirayste hackdhexdeenna ka dhex maqaar naga dhex hel soo dejiso dhexdeenna hackeado kala soo deg annaga mod menu apk hack dhexdeenna hack dhexdeenna ka been abuur ah hack dhexdeena mod menu hack dhexdeenna mod menu apk hack dhexdeenna pc hack dhexdeenna hargaha iyo xayawaanka hack dhexdeenna hack annaga dhexdeena mod menu dharka hack hargaha bilaashka ah dhexdeenna hacks dhexdeenna pc hacks dhexdeenna hacks dhexdeenna hacks dhexdeenna pc dhexdeena ku ciyaar mod apk quful dhexdeena ku ciyaar wax kasta oo quful leh dhexdayada ka ciyaar khiyaano ciyaaro dhexdayada oo dhan mejor hack dhexdeenna mod apk dhexdeenna hack mod menu dhexdeenna mod menu dhexdeena ah waa ognahay qofka khiyaanoolaha ah mod menu ka mid ah oo naga mid ah marwalba beenlow mods dhexdeenna
Bukaanka '0' ee naga mid ah
Oktoobar 3, 2020 markay tahay 8:20 pm
Meltroso Pink isagu wuxuu leeyahay:
Oktoobar 12, 2020 at 1:39 am
Meek, waan jiiday goose, inteenna dhexdeeda ayaan ku dilayaa.
fhdsuifsfsafsafd isagu wuxuu leeyahay:
Oktoobar 21, 2020 markay tahay 3:53 pm